लुम्बिनी प्रदेशमा ४० हजारले कोरोना बिरुद्धको खोप लगाउँदै – Swasthya Samachar
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. राजेन्द्र खनालले लगाए पहिलो खोप
January 27, 2021 January 27, 2021 Editor स्वास्थ्यसमाचार
स्वास्थ्यसमाचार/ कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बुधबारबाट सुरु भएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको उपस्थितीमा खोप अभियान सुरु गरिएको हो । पहिलो खोप लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा राजेन्द्र खनालले लगाएका छन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुरु गरेसँगै सबै प्रदेशमा अभियान सुरु गरिएको हो ।
लुम्बिनीमा ३९ हजार ४ सय ९५ जनालाई खोप दिईने छ भने ८ हजार ७ सय ६८ भयल भ्याक्सिन प्रदेशमा आईसकेको छ । अभियानलाई दुई चरणमा वितरण गरिने छ जसमध्ये प्रदेशका तराईका ६ जिल्लामा माघ १४ अर्थात आजैदेखी ३० हजार ८ सय जनालाई दिईनेछ जसको लागी हरेक जिल्लामा १ खोपकेन्द्रको स्थापना गरिएको छ भने बाकीँ केही ठाउँमा आवश्यकता बमोजिम खोप केन्द्र निर्माण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बताएको छ ।
यस्तै दोस्रो चरणमा पहाडका ६ जिल्लाहरुमा माघ १७ गतेदेखी भ्याक्सिन दिन सुरु गरिनेछ । दोस्रो चरणमा ८ हजार ६ सय ९५ जनालाई खोप दिईने तयारी गरिएको छ । जसमा ७ वटा खोपकेन्द्र निर्धारण भैसकेको छ । त्यसमा कमी हुने देखिएमा थप ५ अस्पतालहरुमा खोप केन्द्र संचालन गरिनेछ ।
प्रत्येक खोप केन्द्रमा तालिम प्राप्त एक जना चिकित्सक सहित ३ जना स्वास्थ्यकर्मी रहनेछन भने स्वास्थ्य जोखिम व्यवस्थापनको लागी सम्बन्धित अस्पतालमा चिकित्सक समुहको व्यवस्था गरिनेछ ।
परिक्षण कालमै रहेको यो खोपले ७० प्रतिशत प्रभावकारी भएको मानिन्छ । खोप लगाउँदा आत्तिनु नपर्ने र यसले आम रुपमा विगतमा जस्तै काम गर्ने खोप लगाएकाहरुको अनुभव छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सुचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले त्यो खोप लगाएपछि भने आतिनुपर्ने अवस्था देखिएन, मैलै पनि लगाए आधा १ घन्टा भन्दा बढी भयो अरुलाई पनि लगाउन आग्रह गर्दछु उनले भने ।
अर्काै अस्पतालका फार्मेसी अधिकृत पदम खनालले पनि आफुले खोप लगाएको र १ घन्टासम्म कुनै प्रतिकृया नदेखीएको बताए। अस्पतालका अर्काे नासु श्रीराम पान्डेले पनि कुनै रियाक्सन नदेखिएको बताए ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले दैनिक १ हजारभन्दा धेरैलाई खोप वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म ३८२ जनाको निधन भैसकेको छ भने हालसम्म २७ हजार २९ जना भन्दा धेरै मानिस संक्रमित भएका छन् ।
खोपको प्राथमिकतामा परेका फ्रन्ट लाईनरहरुको प्रभावकारीताको आधारमा मात्रै दोस्रो चरणको खोप दिईने तयारी गरिएको देखिन्छ । खोप कति प्रभावकारी छ र यसको असर कस्तो रहने भन्ने कुरालाई भने केही समय पर्खनै पर्ने देखिन्छ ।
Total Visit : 332322